Golis oo tababar u qabatay qaar kamid ah macalimiinta dugsiyada Bosaso | Golis Telecom Somalia
Golis oo tababar u qabatay qaar kamid ah macalimiinta dugsiyada Bosaso
Shirkadda Golis Telecom xarunteeda wayn ee Boosaaso ayaa tababar salka ku haya adeegyada shirkadda gaar ahaan qaar kamid ah oo khuseeya goobaha waxbrashada u qabatay xubno kasocday maamulka dugsiyada iyo jaamacada ku yaala magaaladda Boosaaso.
Tababarka oo ka dhacay hoolka xafladaha iyo tababarada ee shirkadda Golis ayaa waxaa kamid ah adeegyadii lagu soo bandhigay adeega HOODO oo ah adeeg u fududaynaya goobaha waxbarashada inay ku gudbiyaan natiijooyinka imtixaanaadka ardayda kuwaas oo si fudud uga heli kara mobile-kooda gacanta.
Sidoo kale adeega lagu magacaabo Web Interface oo isaguna loo arkay inuu muhiimad balaadhan u leeyahay goobaha waxbarashada ayaa lagu tababaray maamulayaashii iyo macalimiintii soo xaadiray tababarka kaas oo ay si fudud musharaadka macalmiinta ugu bixin karaan iyadoo ay lacagtu hal mar u wada dhacayso macalimiinta ayna ugu dhacayso habka fariinta sahalka ah ee astaaneedu tahay 888-da.
Ugu horayn masuuliyiinta shirkadda oo kalmado ka jeediyay madasha furitaanka tababarka ayaa waxaa ugu horayn hadlay C/laahi Cali Cumar oo ah madaxa hawlgalada Shirkadda kaas oo sheegay in shirkadda Golis ay mar walba garab taagantahay goobaha waxbarashada iyo dadka ku hawlan kobcinta garaadka dhalinta soomaaliyeed.
Shiekh Fu’aad Xaaji Nuur oo ah kusimaha madaxa xiriirka dadwaynaha shirkadda Golis ayaa dhankiisa sheegay in adeegyada lagu tababarayo maamulada iyo macalimiinta goobaha waxbarashada ay yihiin adeegyo loo aqoonsaday inay muhiimad u xambaarsanyihiin goobaha waxbarashada iyo dadka ku xeeran ee saamaynta ku leh sida waalidiinta.
Madaxa Suuqgaynta shirkadda Golis C/raxmaan C/laahi Jaamac (Dayax) ayaa ugu dambayn sheegay in adeegyadan iyo adeegyada kale ee balaadhan ay shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda inay ku qanciso islamarkaana ay si gaar ah ugu taageerto goobaha waxbarashada oo saaxiib dhaw la ah Golis.
Kadib khudbadaha masuuliyiinta waxaa la guda galay tababarka oo ay bixinayeen macalimiin iyo khuburo ka tirsan shirkada Golis kuwaas oo usoo bandhigay xubnihii ka qayb galay siminaarka casharo la xiriira qaabka loo isticmaalayo adeegyadan shuruudaha laga rabo isticmaalkoodaba iyagoo usoo ururiyay dhamaan macluumaadka la xiriira waxgalnimada adeegyadaasi.
Si kastaba ha ahaatee shirkadda Golis oo ah shirkad ganacsi ayaa hadana xil wayn iska saartay bulshada ay ku dhex shaqaynayso islamarkaana go’aansatay inay adeegyadeeda qaar ku salayso dhiiri galinta waxbarashada iyo dadka ka shaqeeya.